Kushambadzira paYelp? | Martech Zone
Mugovera, March 23, 2013 Mugovera, March 23, 2013 Douglas Karr
Isu takanga tichiri kubatsira hofisi yedu masseuse (hongu - isu tinayo chaizvo!) Sarudza kana kwete kutenga kushambadza paYelp yaive mari yakanaka yekumukwidziridza Spa pano muIndipolis, Quiescence Chiitiko. Monique akange ave kutoona imwe tsoka traffic kubva pamberi pake paYelp, saka pamwe kushambadza paYelp kwaizogadzira zvimwe.
Mukutaura nemumiriri wekushambadzira, pasuru yekushambadzira yakasimba. Kutanga, Monique aizowana kushambadzira kwakazvitsaurira pane akakodzera, emunharaunda kutsvaga kweYelp kumabhizinesi senge ake. Yelp haimbofi yakasimudzira rimwe bhizinesi - rake chete - pane peji rekutsvaga.
Zvakare, kushambadzira kwaizomhanya pamapeji ebhizinesi evakwikwidzi:
Chekupedzisira, Yelp yaizotangisawo kushambadza zvakanyanya pamafoni nhare:
Mumiriri weYelp akaita basa rakakura rekutifambisa kuburikidza nekumira kwavo munzvimbo, vachizvienzanisa ne Yellow Pages, Trip Advisor uye Chinyorwa chaAngie (mutengi wedu). Kuti vazvione, vakapa iyi Google Trends chati:
Ini pachangu, ndaifunga kuti izvi zvainyengera. Iyi chati inoratidza chaiyo yekuverenga vhoriyamu kuverenga kweayo masayiti pachawo… kwete kutsvaga kwemazwi senge bhizinesi raMonique raizoda. Kana ukadaro kuti tsvaga ("massage Indianapolis"), mhedzisiro yekutsvaga yakasiyana zvakanyanya - ne Chinyorwa chaAngie kuratidzwa pamusoro peYelp neYellow Mapeji ane Google Bhizinesi mhedzisiro iri kutonga peji iri:
Pakupedzisira, takagamuchira mutengo wekushambadzira kweYelp. Mutengo waive usingarambidze, uye kunyange waisanganisira tsika vhidhiyo iyo Yelp ingadai yakaburitsa nemutengi. Mumiririri akatizivisa kuti kana paine vhidhiyo, pane 7% yakakwira kutendeuka. Panonetsa nemutengo waive wekuti waida kondirakiti yegore. Kana Monique anga asiri kuwana mhedzisiro, chirango chekubuda mangwanani yaive mwedzi miviri yekubhadhara mukuwedzera kune mutengo wevhidhiyo. Mune mamwe mazwi, zvinogona kudhura Monique zviuru zviviri zvemadhora kana kushambadza kwanga kusiri kushanda.
Takakurudzira kuti Monique kwete fambira mberi nekushambadzira… kwete nekuti taifunga kuti kushambadzira kweYelp kwaisazoshanda, asi nekuda kwezvinodiwa pakubatanidzwa kwegore. Kuyedzwa kwemazuva makumi matatu kwaizove kwakanaka kuyedza kana chiyero chekushandura chaizotyaira bhizinesi idzva rakakwana kuti Monique azadze kendari yake. Nekudaro, kana ikasadaro, chibvumirano chegore negore chinodikanwa chinogona kukanganisa bhizinesi rake nyowani - apo iye anoda mari zvakanyanya.
Wakamboshandisa here? Yelp Kushambadzira? Chii chaive chiitiko chako?
Tags: Chinyorwa chaAngielocal searchyemunharaunda yekutsvaga adsyemunharaunda yekutsvaga kushambadziraReviewsYelpkuongororwa kwenyaya
Mutengo wemutengo wakadai wekushambadzira unokundikana waizoita chero bhizinesi nyowani yelp.
Zvita 25, 2017 na8: 29 PM
Ini munguva pfupi yapfuura ndakanyorera kushambadza kweelp uye ivo vaizondisheedza vachidzokorora uye nekudzokorora mushure mekunge ndavataurira kuti handikwanise kuzviita uye handina kumbobvira ndagamuchira chero basa uye mwedzi wekutanga ndakabhadhariswa madhora mazana matatu + kune rimwe boka rekudzvanya uye handina kumbobvira ndawana chero vatengi hapana vatengi ve yelp vakadaidzwa kuti vatore chitauro pandakakanzura iyo yelp ads ivo vakandibhadharisa 300 $ pamabasa eelp uye ivo vanofanirwa kunge vari vemahara yelp bhizimusi chitsotsi ini ndaizomutsidzira imwe kufona kana ndarega yaive yemahara zvino pandakabhadhara mwedzi wekutanga uye ini handina kumbozvidza kuti transaction iende thru ivo vakangozvitora kubva kuaccount yangu nekundizivisa kuti vange vabhadharisa kadhi rangu
Kuziva kuti ndainetseka zvakadii ivo vakaramba vachienderera mberi uye vakaita izvi
Kana iwe uchifanira kuita kuti vanhu vasaine kwegore, saka iwe une chivimbo chidiki pane izvo zvauri kutengesa. Handingazvibate nedanda retsoka gumi.
Jul 5, 2013 na10: 52 PM
Yelp akandiudza kuti yaive yepakati pemakore maviri chibvumirano @ 450 / mwedzi
Aug 27, 2013 na2: 58 PM
Ndatenda Jim Hart. Zvamakataura zvaive zvakakosha uye nemamwe makomendi uye posvo, ini ndingangodaro ndisingashambadzi navo. Ivo zvakare vakasvinudza wongororo kubva kune vangu vakavimbika vatengi. Ndiri acupuncturist uye ndinoziva zvishoma nezvezvinhu zvebhizinesi, saka ndinovimba nekutsvaga kuti ndibatsire kuita sarudzo dzangu. Wako ndizvozvo chaizvo. Dai vaivimba nezvavaipa, vaizokutendera kuti uzviedze kwemwedzi. Ndatenda zvakare, Tracy Sturdivant
great post Doug. Ndatarisa kuYelp padhuze kune vatengi uye ndataura zvakajeka nemumiririri wedu nezvegore regore uye kuti yakawanda sei yechibvumirano mhondi yaive. Ini ndinofungidzira kuti tichaona zvimwe zvingasarudzwa munguva pfupi, kunyanya nezvakatumirwa seizvi.
Tevera yako Google kutungamira; zvimwe kunze kwekudya nekumwa Yelp hainyatso kunyoresa kunyangwe YemaJji Mapeji anoenderera achidzikira achitenderera muzvikamu zvese futi. Zvinoita sekusimbisa chinzvimbo chaDoug sezvo Yelp isina kunyanyo kunyoreswa muboka rezvehutano uye ongororo yavo inoratidza kupokana kweYuppies sevanhu vayo vega.
Ini ndanzwa akati wandei emabhizimusi madiki achigunun'una nezvekusimba-ruoko kubva kuYelp. Mutengesi anotokudaidza uye anokupa iyo pandi uye kana iwe ukaramba kusaina kushambadza kwegore, iwe uchaona yako mashanu nyeredzi ratings haichaoneke papeji reimba yavo zvekare. Iwo anosvinwa kunze kana kusvika pasi. Izvi zvakaitika nemabhizimusi madiki matanhatu (kazhinji vanhu 5-6) mumwedzi mitanhatu yekupedzisira. Uye ini ndakatarisa mapeji emamwe mashoma (imwe yandakanyora ndikatadza kuwana yangu 1 nyeredzi ongororo) uye chimwe chinhu chinoita kunge hinkey kumberi uko.
Jul 5, 2013 na10: 50 PM
Chokwadi, ndizvo chaizvo zvavakandiitira.
Jul 11, 2013 na6: 58 PM
Ndakafunga kusaina kwemwedzi mitanhatu nemari yekumisa yemwedzi mumwe. Chokwadi zvinowedzerwa zvauya nemibvunzo miviri chete mukati memwedzi mitatu. Vanoti kune chando chebhora nemashambadziro iwe unoona mimwe mhedzisiro nekufamba kwenguva. Izvo zvinongondiita kuti ndifunge kuti panofanira kunge paine imwe matrix inoratidza kushambadza kwako panguva dziri nani semuenzaniso pawanga uripo kwenguva yakareba. Ini ndinofunga ndiri kuzodya mari yekuuraya uye kuisa mari yangu yandakasiya mukutengesa kwakananga. Ivo vakatosefa imwe yeangu akakosha wongororo! Ah zvakanaka.
Gumiguru 11, 2013 na9: 37 PM
Ndiri kufara kwazvo ndikawana ichi chinyorwa. Ndiri kunyatso kufunga kushambadza neYelp asi ndiri kuzeza kusaina kwegore rimwe. Ndakapihwa sarudzo yemwedzi mitanhatu nemutengo wemwedzi mumwe chete, asi sarudzo yevhidhiyo inobviswa. Yelp ine imwe PPC sarudzo isingade chibvumirano chandiri kusendamira kwachiri. Nekudaro, ini ndakaudzwa kana ndikaenda nePPC, ini handigone kusaina kushambadzira gare gare mumugwagwa. Zvinotaridza kusanzwisisika kwandiri ..
Kutambisa kukuru kwazvo kwemari kwese kune bhizinesi rangu. Ini ndinowana kakapetwa kagumi traffic kune yangu Yelp peji zvine muviri uye mahara ipapo mabhatani anogadzirwa kuburikidza nekubhadharwa kushambadzira.
Gumiguru 22, 2013 na7: 40 PM
Ndataura neYelp Rep mangwanani ano. Ini ndinemazuvapaPortland OR uye ndiri mukadzi mumwe anoratidza. Ini ndaifunga kuti Yelp fizi yaive yeastronomical uye yaida yegore rimwe kontrakiti kupenga. Kunyange ini ndaizoda kushambadza neYelp, ini handidi kubhadhara iyo $ 350 / mo. Mitengo nezvibvumirano zvakasiyana zvakatotumirwa nemunhu wese pano ndezvechokwadi. Chimwe chinhu chandakabvunza nezvacho yaive vhidhiyo. Kunyangwe ivo vachiti ivo vari kubhadhara vhidhiyo (kurudyi, isu tinonyatso ziva kuti tiri kuibhadhara). Kana iwe uchida kushandisa vhidhiyo pane yako bhizinesi webhusaiti, iwe unofanirwa kutenga iyo vhidhiyo kubva kumutori wemifananidzo. Saka kunyangwe isu tiri kuribhadharira, haisi yedu yekushandisa.
Iko kune mubhadharo-wega-tinya sarudzo, Asi, iri madhora mazana maviri / pamwedzi. uye handina chokwadi chaizvo kuti unogona kuisa chivharo pairi.
Ehe ivo vanotaura kuti sezvo iwe uri pamusoro, bhizinesi rese riri kuuya nenzira yako, rinenge rakavimbiswa. Hongu… kwete. Kana ivo vakafunga chaizvo izvo, saka paisazove nekudikanwa kwechibvumirano chegore. Ini ndingangoda zvangu kubhadhara ndega vhidhiyo iyi ndogadza yangu yega bhajeti yemwedzi wozova (kana uchifanira kuva nechibvumirano) mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, kondirakiti yegore rimwe neRinonzwisisika bhajeti.
Ndine urombo, hapana Yelp kushambadzira kwandiri, izvozvi.
Gumiguru 23, 2013 na6: 54 PM
Ndiri kushanda nebhizinesi rinowana kanokwana kasere vatengi vatsva pamwedzi chete kubva yelp. Izvo zvese zvinoenderana!
Asi iwe unogona sei kuva nechokwadi chekuti ivo vasere vatengi vatsva vari kuuya kubva kune vakabhadhara kushambadzira maringe neyemahara Yelp zvinyorwa? Iwe hauna zano nekuti haugone kusiyanisa shanduko kubva kune zvakabhadharwa kushambadzira maringe neyemahara zvinyorwa.
Yelp yakanyatsofanana neye mafia. Ini handisi mumwe akanyengedzwa muridzi webhizinesi diki uyo asingazive CPC kubva kune inofungidzirwa yakashambadzirwa. Izwi rangu rekutanga rezano: Usaite chero mumamiriro ezvinhu kushambadza neYelp. Idzo mbavha (dzakafanana nadhiyabhorosi chaidzo) dzinongoda kuti iwe usayine mutsetse une madonhwe kuti vagogona kukusunga nechibvumirano chavo uye voenderera mberi kukupa basa rinotyisa. Ini ndanyunyuta kuYelp's kushambadzira reps kuti kushambadzira kwavo kunodzvanya kuburikidza zvachose kunoyamwa pane kanopfuura kamwe chiitiko. Mhinduro yandakagamuchira yakave yakafanana nguva dzese. Iye mutengesi weYelp mutengesi anotumira kwandiri mamwe matanho ezvekuti peji yangu yelp iri kuwana sei X nhamba yekutarisa, x nhamba yevanhu vanodzvanya kune yangu webhusaiti kubva kune yelp peji, x nhamba yemafoni ekuona, uye X nhamba yeYelp madhiri atengeswa. Ivo vanokundikana kutaura kuti zvese izvi zvimiro zvine zvishoma kwazvo zvekuita neyakabhadharwa Yelp kushambadzira. Zvizhinji zveizvi mhedzisiro yangu yemahara Yelp peji rondedzero. Chaizvoizvo muchidimbu, kana ndine mazana matatu emahara ekuona maYelp pawebhusaiti yangu. kuvimbisa kuti angangove mutengi achandisheedza kana kutoisa odha), nei iyo Yelp yekutengesa ichiratidzira iwo iwo matanho sekunge ndiri kuwana iwo semhedzisiro yangu akabhadharwa kushambadza ??? Nekuti vazhinji vevatengi vavo ndevemabhizimusi madiki vatengi vasinganyatso kushambadzira savvy uye ivo vanongoedza kuvanyonganisa kuti vatende kuti pasina kubhadhara Yelp kushambadzira zvese izvi zvinopera.
Vanhu ava ndezvechokwadi scam artists. Ehe, Yelp yakanaka sosi yebhizimusi nyowani ndosaka ndakanyorera kusaiti kwakabhadharwa pakutanga. Nekudaro, iyo yepazasi mutsara ndeyekuti yavo yekushambadzira mapakeji ndeyakazara kubvarura izvo zvinongobatsira Yelp, kwete mushambadzi. Waizviziva here? Yelp vatengesi vanhu havangakupe nhamba yavo yefoni kuti usvike kwavari? Iwe hauna nzira yekuvafonera. Vanogona chete kukufonera. Unogona kuvatumira email, asi vanogona kusapindura kwemazuva. Zvino pavanopedzisira vafona, ukatadza kufona cuz ndiwe unoziva uchiita bhizimusi diki, hauna nzira yekuvafonera. Izvi zvinogona kuenderera mberi. Sezvineiwo vanhu vanotengesa ava vakabatikana zvekuti havana nguva yekutaura nevanhu vanopembedza basa ravo, vatengi vavo.
Kamwe kontrakiti yangu yekushambadzira yapera, hapana nzira yandicha saina navo zvakare. Yese chitsotsi. Gara neyemahara Yelp zvinyorwa. Inoshanda zvirinani kupfuura kushambadzira kwakabhadharwa uye yemahara.
Ok. Yelp no bueno. Chii chaunokurudzira?
Ndingadai ndichiri kukurudzira kuve nepeji paYelp, Facebook neGoogle +… asi ndisina chokwadi chekuti ndinoshambadza paYelp kupihwa zvavanoda. Kana iwe uri mupi webasa muAngie's Chinyorwa, ivo vane ivo vanonyanya kukosha vateereri kunze uko uye nzira yakanaka yekudyidzana pakati pevanopa nevatengi.
Iwe uri kunyanya kufunga nezvekushandisa Yelp kuwana vatengi vatsva kana kungoita kuti zvive nyore kune ako aripo vatengi kukuwana iwe? Semunhu anoshandisa Yelp, ndinoshandisa Yelp kune zvese zvitsva kuwanikwa pamwe nekutarisa kumusoro mamenu uye nhamba dzenhare kumabhizinesi andinotoziva nezvangu nekuenda. Kunyange zvakadaro, ndinofanira kutaura kuti handina kumbobvira ndadzvanya kushambadziro uye kana ndikaona kushambadza, ndinofungidzira kuti kana uchifanira kushambadza paYelp saka chigadzirwa chako hachifanirwe kunge chiri chakanaka.
Mbudzi 19, 2014 na2: 36 PM
Handina chokwadi kuti icho chiitiko!
Zvita 28, 2014 na9: 09 PM
Nehurombo, mukadzi wangu akangomhanyisa shambadziro yebhizimusi rekugadzira bvudzi. Yelp akataura kuti paive nemabhatani zana pachi shambadziro chake mumavhiki maviri ekutanga. Isu tikati hapana nzira, mukadzi wangu ane nharembozha, bhizinesi uye kwete kamwe chete kufona! Iye ane 100 nyeredzi Yelp saiti ine matatu makuru ongororo sei aigona kuwana zero mafoni kubva kuvanhu vaifarira zvakakwana kuti vatobaya pamushambadziro wake?
Chikamu chinonhuwa chaicho ndechekuti Yelp akatibhadharisa madhora 3.50 pasiti! ,,
Hatina kumbotarisira kuwana zvinopfuura zvakapetwa zvishoma (isu tinofunga iyo yekuverengera kuverenga ndeyekubiridzira) uye nehuremo muzana (10-30%) yeavo vakadzvanya kufona.
Hapana mafoni angadai asina kuita basa hombe uye zvimwe zvaitarisirwa, asi kwete apo Yelp painoda kutibhadharisa tinodzvanya zana.
Yelp's timu yekutsigira yakurudzira kuti isu tigadzirise peji reYelp uye tsananguro yebhizinesi. Izvo hazviite chinhu kutsanangura iyo 0% yekufona chiyero kubva kune inofungidzirwa zana+ kubaya.
Tinoda kubva kuYelp izvozvi, ivo vanotiudza isu taifanira kunge takanzura ne15 th yemwedzi wapfuura.
Chero zano rekuti ungatibudise sei uye nemabatiro atingaite zvakanaka kuburitsa izwi kune vamwe varidzi vemabhizinesi madiki kuti vadzivise Yelp senge denda.
Kana ivo vaine yako yekutarisa ruzivo rweakaundi uye voita otomatiki kubvisa mari ... Kana vakutyisidzira nedanho repamutemo… chengeta humbowo hwemarekodhi efoni yako kuratidza hunyengeri. Ndozvandaizoita. Ehezve unogona kurasikirwa mudare… .kana kungobvisa uye kubhadhara iyo chirango. Ndinovenga Yelp. Isu varidzi vemabhizinesi tinofanirwa kurwisa.
Sep 21, 2015 na1: 00 PM
Isu tiri kambani yemvura uye yeforoma yekugadzirisa uye isu tiri kushambadza neYelp. Haisi mibairo mikuru uye kondirakiti yegore rimwe. Pamusoro pezvo, ivo vakabvisa kumwe kuongorora kwedu kwakanaka nechikonzero kupfuura chavanogona kunge vari vekunyepedzera. Usakurudzire kuti utambise mari yako navo.
Nov 2, 2015 pa11: 15AM
Ichi chikuru ruzivo. Ini ndaive nedambudziko rakafanana nemeso bhuku. Ivo havana hanya nazvo zvachose.
Kukadzi 4, 2016 na12: 13 PM
Neniwo ndine bhizinesi diki, ini ndaive neshanu nyeredzi chiyero, yaive mutengi wandinoshandira, uye iye aisandiziva kana kuva nechero mhando yekubatana neni yaigona kukanganisa mafungiro ake, izvo zvaizoita kuti ape ratidziswa chiyero.
Akazvitora ega kuti andipe ongororo yakanaka kwazvo. Akadudza zvikonzero chaizvo zvemafungiro ake uye aive neruzivo nezvebasa rebasa. Pakanga pasina chinhu muongororo icho chaizotaridza kuti hachisi chinhu kunze kwekusasarura maonero.
Mushure mekutengesa yelp kuyedza kunditengesa pachirongwa chakabhadharwa, ndakaramba zvine mutsigo kakawanda munguva zhinji dzekutengesa mafoni.
Mushure mekudzora nyeredzi yangu shanu yakanyangarika. Ikozvino yaive muchikamu chisina kukurudzirwa. Ndiye chete wandaiongorora. Ndakataurirana yelp ndikataura nyaya yangu kuti izwi rekuti "harikurudzirwi" rinotungamira zvisirizvo uye nekukurumidza kana angangove mutengi akaona izwi rekuti "harikurudzirwi" ivo vanobva vatenda kuti kuongororwa kwakaipa uye bhizinesi harikurudzirwe uye enda mberi.
Mushure mekutaura nyaya yangu handina kufunga kuti chero chinhu chingaitika ndakafara kuona ivo vakatumira iyo shanu nyeredzi yekuongorora.
Zvino nguva pfupi mushure mekunge vaedza kunditengesera chirongwa chakabhadharwa zvakare, uye zvakare ndakaramba. Wobva wafungidzira chii, yangu shanu nyeredzi chiyero chakabviswa pasi zvakare.
Munguva iyi ndaikumbira vatengi kuti vandiongorore. Vamwe vaitaridzika kuva nechivimbo chekuti vaizotora nguva yekudzokorora. Hapana imwe wongororo yakamboratidzwa pane rangu peji zvakare. Ini ndakazoona kuti wongororo haisi kuita kuti ive iri peji. Saka ikozvino ini handitaure yelp kune vatengi.
denga simone kutora mifananidzo
Ah chaizvo? Ini ndaive nefoni yakakwira kubva kwavari nezuro. Vakandisheedza kasingaperi kusvikira ndabvuma kwemwedzi mitatu nekapu yemadhora mazana matatu nemakumi mairi nemashanu - ndinonetsekana kuti chii chandingave ndasaina izvozvi
Dombo Solid Web Dev
Ini ndanga ndichifunga nezve kushambadza navo, asi mumiriri wavo airamba achindisheedza zuva rega rega kwemwedzi iyo yandaiona isinganzwisisike uye nenzira zvakare inosunda.
Zvakaitika kwandiri zvakare!
Usaite, sezvakataurwa nevamwe, Shambadza neYelp!
Vanotaura chero chinhu kuti iwe unyore ipapo iwe hauzombowana chero mhinduro!
Ivo zvakare vanokudzivirira iwe kubva pakuita shanduko kune yako yemahara zvinyorwa pane Yelp!
Vakachaja account yangu pasina mvumo yangu mushure mekunge vandivimbisa kakawanda kuti havadi!
Ndakagashira mafoni mazhinji kubva kuvanhu vekutengesa avo vaiti vakaona ndiri kushambadza paYelp uye ndaida kuona kana ndaizoedza kushambadzira nekambani yavo, kana kushandisa kambani yavo yeSEO ..
izvi zvinoratidza kuti Yelp haiongorore kudzvanywa uye inoita kuti ini ndibhadhare chete kune vanhu vari kutsvaga uye vanofarira kushandisa sevhisi yangu sekureva kwavo! !!
Yakazara b / s kambani!
Ini handina kumbobvumidza kushambadza kwangu vasati vaburitsa
vane mifananidzo isina kujairika pairi pachinzvimbo che logo yangu
havana kumbonditumira bhiri yekubhadhara mukati memazuva makumi matatu, kubhadharisa zuva rangu rekubhangi 30 !!!!
(zvinhu zvese zvavakanyepa nezvazvo)
.. Ndakataura nemaneja, akati "zvachose, tichawana shanduko idzi dzakaitwa kuaccount yako" (zvinhu zvishanu zvaive zvisirizvo, kusanganisira nharaunda yangu yebasa) "tinoda kuti iwe ufare nebasa rauri kugamuchira. ”
..panguva iyoyo ini ndakamubvunza kuti ndedzipi shanduko dzaangave kuita (asati abva parunhare, aida kuona kuti anzwisisa) Haana kutumidza CHIMWE CHIMWE CHINHU Chataive tambokurukura!
anga asingatoteerere! Ndakafunga kuti ndanga ndanzwa achitaura kumashure (nei ndakamukumbira kuti adzokerezve zvinhu kwandiri)
MHANYA! murume uyu i "Benzi Visor"
ndiye mukomana anodzidzisa aya Scam Artist Madhimoni!
Usashambadze nekambani ine mumvuri!
Vakandibhadharisa madhora mazana matatu nemakumi matatu nemashanu uye ini ndakangogamuchira gumi nenomwe yekutengesa mafoni nezve webhusaiti yangu, kwete kamwe chete kubva kune mumwe mutengi! zvakare vakwikwidzi havana kuongororwa uye pamwe vari kudzvanya kushambadza kwako!
Ini zvino ndave neyangu shanu nyeredzi wongororo dzabviswa MAZVIMBO YELP!
Ndatenda nemazano - Ini ndanga ndichifunga yelp yakabhadharwa kushambadza Wakatora nguva yakareba sei kushambadzira? Ini ndinogona kubvunza, iwe wakaisa mari yakawanda sei mairi futi?
Bhizinesi redu raivewo nemhando dzakasiyana dzekuwongorora kusanganisira imwe kana shanu nyeredzi wongororo. Imwe nyeredzi ongororo yaive pachena yakanyorwa nemunhu asina kuenzana aipopota uye anga asina kunyatsoshanyira bhizinesi redu uye vatatu vatatu vaibva kune vatengi chaivo.
Ini ndakaramba zvine ruremekedzo kushevedzera kwekushambadzira (mazhinji mumavhiki mashoma), uye ongororo dzenyeredzi shanu uye shanu dzakavanzwa, zvichisiya kungoongorora kweyeredzi imwe chete. Vanotaura kuti vanobvisa wongororo dzisiri dzechokwadi, zvisinei kuti imwe nyeredzi ongororo yakapihwa nemuongorori aine ongororo imwe chete, nepo mumwe wevashanu akange achibva kune muongorori aine ongororo zhinji paprofile yavo.
Ivo varevi venhema uye mbavha pane yelp. Ini handingambovabhadharira kana cent, uye handimbodzishandisa semutengi kutsvaga zvitoro zvemuno kana. Ndinovhota nesimba rangu revatengi - ndapota usamboshandisa saiti iyoyo! Kuwanda kwevanhu vanodzivirira kushanya kwariri, kushoma kwemaonero avanowana, uye netariro kuti vachabuda kunze kwebhizinesi.
Saka ndakatarisa mukati mayo uye iyo nyeredzi yaive yechokwadi. Izvo zvakanaka, isu tiri mune indasitiri uko imwe nyeredzi iri tsika. kunyangwe iyo nyeredzi ongororo yaive yechokwadi, zvaive zvichinyatso shamisa kuti yelp yakasarudza iyo chete kuti ichengete, uku ichitora wongororo yepamusoro mushure mekunge tati "kwete" kumashambadziro akabhadharwa. Yelp yuck.
Chiitiko chisingatendeseki nezviziviso zveyelp, hazvina kumbofungidzirwa kuti hachizi hukuru ichi chingave chitsotsi chose. Vanokukiyira muchibvumirano chakareba chegore, sekutsanangurwa kwakawanda pano, kukanganwa nezvekuti mashambadziro ari kuita sei kana kutevedzera kana vangokupinza mubhodhi.
Akanyarara kwazvo maitiro ekutengesa, zvipikirwa zvekunyepa, hapana chimwe chinopfuura chitsotsi!
PPC yavo tekinoroji zvakare haina chokwadi kwazvo, vakafonerwa masevhisi asina hukama uye huwandu hwavaive nahwo hwakanga husina kukwana zvachose.
Kana vakabvunzwa nezvekuti nei mafoni achiuya asina hukama nebhizinesi, vanotaura kuti bhizinesi iri mune chimwe chikamu uye mushanyi anokwana muchikamu icho anozoona kushambadzira, izvo zvinoratidza kuti ivo vanongoda kudzvanya uye vasina hanya nekuratidzira kushambadza mutengi ari kunyatso kutsvaga basa rako.
Akatendeseka kwazvo, usawira pasi kumusungo, gara kure!
Bvumiranai, vakaita zvakafanana kwandiri, vakatora nyeredzi dzangu shanu dzese nekuti ndaisada kusaina nadzo, chii chatinofanira kuita? Uku kubiridzira.
Yese kutambisa kwemari ndinorumbidza kuti munhu wese aise shoko rekuti vanhu ava havazive zvavari kuita plus ndinofunga vane vashandi vanodzvanya pazvishambadziro kushandisa kumusoro kushambadza madhora. Craigs Rondedzero yakandiwana ka100 nguva mhinduro yekuti Zvakawanda sei? Chimirira?… .Nekuti hapana chikonzero Craigs Chinyorwa kushambadzira mahara. Vanhu ava imbavha uye zviri nyore.
Ndakave nezviitiko zvinotyisa neYelp ads. Ivo anodhura. Iwe wakavharirwa muchibvumirano chaunofanira kubhadhara zvakanyanya kuti ubvise kare. Handina kuwana mhedzisiro kubva kushambadziro iyi. Ndokumbirawo usaite iko kukanganisa kwandakaita. Shandisa ako ekushambadzira madhora kumwe kunhu.
Ini chaizvo ndakaenda kune ino. Zvinorwadza Zvinorwadza…. uye ndiri PR / Kushambadzira nyanzvi. Ini ndakanyatsorondedzera mafungiro aElaine. Iyo "tinya pakushambadzira" chiyero chinenge chisina kujeka pakunakira - nevatengesi vachindiudza kuti ingangoita madhora mashanu - $ 5 zvichienderana nevakwikwidzi (mamwe mapipi w / biz rimwe chete anozvifambisa) ipo paitove ne $ 10 / tinya . Mumwedzi inopfuura mitatu pakanga PASINA KUTendeuka. Maalgorithms avo ari kuda kubatwa zvakakomba - Yelp yaizounza kushambadzira kwedu apo vanhu vaitsvaga mabasa asina hukama. Ndosaka rakayamwa…. ndiani anoda kushambadzira kuti ataure "bhekari" ivo pavakatsvaga "bar".
Kana ndichigona kuzviunganidza pamwe ndinogona kumhan'ara kubiridzira…. zvakashata kudaro.
Ini ndakanyorera yelp uye yega sarudzo yavakandipa yaive kondirakiti yegore. Mushure memwedzi mitanhatu, ndakanga ndaneta nekubhadhara iyo $ 1 yemwedzi pamubhadharo kunyangwe hazvo ndanga ndisiri kuwana chero vatengi vatsva kubva kwavari. Saka ndanga ndichiedza kudzima kwemwedzi. Ivo vakati ndinofanira kupa 6 mazuva chiziviso uye kubhadhara iyo $ 375 yekutanga mari yekumisa. Pane chero munhu anoziva zvichaitika kana ndikaramba kubhadhara?
Jun 30, 2016 pa3: 30AM
Ndiri muridzi webhizinesi diki. Ini munguva pfupi yapfuura ndakanzura chibvumirano changu neelp futi. Kwete chete kwaive kusashanda zvakanaka kwemari yatakabhadhara, asi ivo vanowedzera-kupa simba kumutengi. Mutengi anoramba asingazivikanwe, anonyora ongororo dzakaipa nezve bhizinesi rako, pasina humbowo. Izvo zvinobvumidza vakwikwidzi vako kunyora manyepo / akaipa ongororo zvisina kuzivikanwa, uye kukanganisa bhizinesi rako mukurumbira. Saka Yelp anoda kuti ndibhadhare $ 540 pamwedzi izvo ?! Ini ndakatove nemutengi akatipa 1 nyeredzi ongororo, nekuda kwekuti isu takanga takaunganidzwa, uye takanga tisina hunyanzvi hunowanikwa kwaari panguva iyoyo (10:30 pm). Takanga tisina kuvaitira basa, taive nehunhu, taive pamberi uye takatendeka. Asi takawana 1 nyeredzi ongororo nekuda kwekuti isu taive takabatikana! Yelp yakaramba kuibvisa.
Jul 5, 2016 pa 8: 22 AM
Iwe unogona kuzvishandira-kushambadzira papuratifomu yeYelp pane chero hurongwa hwaunoda. Izvo chete kana iwe ukanyora chibvumirano neYelp kuti kuzvipira kwegore negore kunodzvanya mukati.
Pinda paBiz.yelp.com semuridzi webhizinesi uye iwe unogona kuvhura kushambadzira kune chero huwandu kana nguva yenguva. Iwe hautore vhidhiyo asi unogona kuyedza izvo kushambadza. Isu tinovashandisa kune vatengi.
Jul 25, 2016 pa 9: 20 AM
Michelle - Tinotenda nekutumira. Iwe unokwanisa here kundipa zvakadzama kutaridzika / kunzwisisa kwega kushandira kushambadzira vs "kubhuka zvibvumirano"?
Sep 27, 2016 na2: 29 PM
Kupokana nekutonga kwangu kuri nani, ndakasaina neYelp mushandirapamwe wekushambadzira wekumhanyisa kwemwedzi mitatu, max ad adhura $ 1,000 700 pamwedzi, iine $ XNUMX yekumbomira kubhadhara. Bhizinesi rangu mutemo wekubhuroka. Ini ndiri gweta rekubhuroka / gweta, usaite chero imwe mhando yemutemo, uye Yelp aizviziva izvozvo. Nguva pfupi mushure mekunge ndaona kuti vaimhanyisa shambadziro yangu (iyo yandaibhadharira kubaya) yekutsvaga "mutemo wemaroja" uye "live scan fingapurindi". Ini handisi kugadzira izvi!
Nekuda kweiyo yakakanganisika sevhisi sevhisi, ini ndakazivisa Yelp uye ndikakanzura sevhisi. Vakaenderera mberi ndokundichaja mari yekushambadzira kwemwedzi miviri yasara ($ 575 uye $ 1,000 700) uyezve iyo $ XNUMX yekubhadhara mari.
Ndakapokana mhosva dzese nhatu nekambani yangu yekadhi rechikwereti. # 1 kuchaja ($ 575) yakagadziriswa zvizere mukuda kwangu. # 2 kuchaja ($ 1,000 3) ichiri kuenderera mberi. # 700 kubhadharisa (iyo $ XNUMX yekumisa mari) yakatemwa mukufarirwa naYelp nekuti "yaive muchibvumirano"! Ini ndichatora iyo nguva nedambudziko kuvamhan'arira ivo nekuda kwayo? Kusava nechokwadi.
Gumiguru 25, 2016 na8: 40 PM
Yelp ndiyo yakaipa kambani yandakamboshanda nayo. Iyo yega-bhatani rakakwana kubvarura. Ndakavaona vachinyengera uye ndaifanirwa kushanda kuti ndizive nezve mari dzekudzima. Kutenda ndaingova nekontrakiti yemwedzi mitatu. Ini ndinoshanda nemakambani mazhinji epamhepo uye ivo havana kukwana, asi Yelp ndiyo yega yandisingavimbe nayo.
Nov 3, 2016 pa12: 31AM
Ndine murume mumwe (ini) wekugadzirisa biz biz, iyo Yelp rep yaive yakanakisa uye yakashingirira mukuedza kuti ndiende kusaina. Ndakamuudza pese pataitaura zvandaitsvaga. Kana vanhu vakatsvaga "gadziriso yemoto uye guta" Ini ndinoona iyo yelp inoti "Yakanakisa Gesi choto kugadzirisa muRenton, WA - Yelp" uye inogara iri papeji rekutanga. Ndakavaudza Kana ndikabhadhara iwe ndichaisa chinzvimbo papeji rekutanga kana vangobaya paYelp saiti, ndakaudzwa kuti ndaizodaro. Ndakatsvaga nezuro husiku, ndakadzvanya paYelp, pandakasvika peji 9 ipapo ndaive, 80+ bhizinesi gare gare, ndakatozouya ndichitevera mukomana ane Biz yake inonzi Honey-do Handyman, I'm sure he is a great guy but chaizvo? Ini ndinogadzira nzvimbo yekugadzirisa moto uye murume anobata anondirova mumhedzisiro? Inodaidzwa kukanzura uye iine nyaya imwechete sevamwe vanhu vese vandakaverenga nezvayo pane ino saiti, chokwadi ndinoshuvira dai ndingadai ndakaverenga izvi zvisati zvaitika. Ini ndangobvisa kiredhiti kadhi rangu saka ndinovimba kunzvenga iwo 2 mwedzi BS iyo isina kumbobvira yataurwa pandakasaina, uye ndakati ndichaipa mwedzi yakati wandei ndione kana ndichida kuenderera. Iko hakuna nzira yandaizosaina nayo chibvumirano, ndingadai ndisina kuita kuti zvinyatsojeka kune mutengesi rep. Ndakaziva zvirinani asi ndakatengeswa zvakadaro. Zvekare zvakare ndakakanganwa kuvimba matumbu angu, lets face it, "isiri-biast" (sp) kambani yekuyera inokumbira kambani kuwedzera madhora, HELLO !!!!!!!! Ndine urombo…….
Zvita 29, 2016 na2: 00 PM
Ndinofara kuona iyi hurukuro, ndinongoshuva dai ndakaitarisa NDISATI ndasaina neYelp Ad chirongwa. Isu tinotenda ichi chitsotsi chose. Mushure memwedzi wekutanga ndakapihwa analytics yavo uye bhiri iyo yakaratidza makumi emafoni ekuziva ndinoziva kuti hatina kumbobvira tagamuchira: ndakanyatsoteedzera edu ekufonera ID matanda uye 75% yemafoni avakati tawane haana kuitika (zuva / nguva / foni nhamba haina kunyoresa) uye vazhinji vakati hapana mhinduro, zvisingaite. Isu takaona hukuru hukuru mumakombi ekukumbira marara uye mazhinji eaya akaenzana nematanda edu ekufona. Nekuda kweichi isu hatitende zvachose nhamba yavo mumazana emabhatani atinofungidzirwa kuti takapfuura neyekushambadzira. Takanga tine maZERO kufona kubva kuvanhu vachiti vakaona Yelp Ad yedu neZERO vatengi maodha. Nekuda kwemutemo wavo wekudzima takazopedzisira tabvisirwa mari ingangoita $ 1400 kuti tibve muchitsotsi. Nzira yakapusa yekutarisa izvi ndeyekuti havagone kupa Chero humbowo hwekubaya kwavanoti vanogadzira bhizinesi rako, zvinova ndizvo zvavanosimudza kubhadhara. Chenjera, chenjera, chenjera, isu hatizombokurudzira Yelp Ads kubvarura kune chero munhu.
Ndira 25, 2017 na12: 35 PM
Chakaipisisa kushambadzira chigadzirwa chakamboitika! Akashandisa kupfuura $ 2000 uye haana kana one lead. Ipapo kukanzurwa ndokubhadhariswa madhora mazana manomwe. Hazvikurudzire kune chero munhu, chero nguva. Zadzisa ripoff !! Ndakabvunzwa kuti nditaure nemumwe munhu nezvazvo uye handina kuzombodzorera nhare dzangu kana email.
Iyo nhamba yekutanga yekukwezva bhizinesi paYELP haisi kushambadzira. Zviri wongororo.
Ndosaka takagadzira iyo "Y" yekuongorora booster - izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vanhu kukusiya wongororo. - Zvese zvechikamu chemutengo wemwedzi mumwe wekushambadzira, tora wongororo yegore rose. Pamwe wongororo inonamira kwakatenderedza nekusingaperi. Bata 5StarMarketingSoftware yemaitiro ari nani ekuvaka bhizinesi paYelp.
Ndakasaina muyedzo yemahara neelp, ndakamiswa mushure mesvondo rimwe chete kubva pandakanga ndisina kuwana zvinotungamira, uye vakachaja kadhi rangu $ 450 mwedzi miviri mushure, vachiti handina kumbobvira ndakanzura. Vakati ndinofanira kunge ndakagamuchira email yekudzima kubva kwavari kana ndikakanzura, izvo zvekare sezvo ini ndanga ndisiri nharo nehurongwa hwavo. Ndataura nedhipatimendi ravo rekubhadhara, avo vakati havangadzosere account yangu uye vanogona kuikanzura nhasi… Izvi zvaiita kunge zvakaverengerwa. Ndakabva ndangofonera kambani yangu yemakadhi ekubhengi ndikavaita kuti vapikisane nemhosva. Pandakadaidza yelp back kuti nditaure nemaneja, ivo vaisadaira nekuti vaiti ndiko kutanga kwemwedzi uye vaive vakaremerwa nenyaya dzekubhadhara. Ndinogona kufungidzira! Ini ndakanga ndisati ndagamuchira invoice imwe, email kana ziviso yekuti ndaizobhadhariswa panguva ino, ivo vakangomhanya kadhi rangu. Google neFacebook vanoramba vachitumira zvinyorwa kwauri paunenge uchishambadza. Yelp inoita kunge isiri kuita nemazvo, uye uku kukundikana kuyedza kuunganidza mari pamutengo wevatengi. Havasi kufara nekushayikwa kwavo kugadzirisa mamiriro ezvinhu, kana kwavo vatengi. Usasainira KUSVIRA YEMAHARA YELP TRIAL! CHINYORWA